I-Semalt ichaza ukuba yeyiphi i-Web Scraping Is
I-Web scraping yinkqubo yokukhipha imiqulu emikhulu yedatha kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. usebenzisa isixhobo esibizwa ngokuba yi-website ye-scraper . Idatha ekhishiwe ingagcinwa kwifolda ekhethiweyo okanye nayiphi na indawo. Iyakwazi kwakhona ukugcinwa kwisiseko sedatha kwifomathi okanye kwifomathi yespredishithi.
Unolwazi lweewebhu ezininzi lunokujongwa kuphela usebenzisa isiphequluli sewebhu. Awukwazi ukugcina ikopi yokusebenzisa kwakho. Ukhetho lwenu kuphela ukukopisha umxholo ngesandla kwaye unamathisele kwenye indawo. Ngaphandle kokukhathazeka nokukhathazeka, kudla ixesha. Khawucinge ukuba ufanele ukopishe yonke into enomxholo we-website engama-200. Kuya kuthatha ixesha elininzi!
Nangona kunjalo, ukucoca ngewebhu yindlela yokwenza le nkqubo. Endaweni yenkopi yokukopisha, isofthiwe yokuqhafaza iwebhu okanye i-website scraper iya kwenza umsebenzi ngexesha elifutshane kakhulu. Kuyakusindisa ezininzi iintlungu, iinzame kunye nexesha.
Iprojekti inakho ukukhangela izinto ezihlukeneyo zedata kumaphepha amaninzi ewebhu kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo kwisicelo sakho. Okwangoku, kukho iindidi ezimbini eziphambili ze-website scrapers. Ngakolunye uhlangothi, kukho iziqhekeza eziqhelekileyo ezinokuqwalaselwa ukuba zisebenze naliphi na iwebhusayithi. Naluphi na okhethayo, kufuneka ucofe iqhosha elilodwa ukukhupha kwaye ulondoloze idatha ethile kwikhompyutha yakho yangaphakathi. 3)
Ngenxa yokuba iindleko zesofthiwe eyakhelwe ngokwesiko ziphakamileyo kakhulu, abantu abaninzi banqwenela ukuya kwi-software ye-web scraping software.Kodwa ke, abo banako ukungathinteki. , ngokukodwa kubasebenzisi abangacwangcanga ubugcisa. + Kwaye kunzima ukufunda.
Yilapho i-WebHarvy ifikeleleka kakuhle kwaye yaveliswa ukujongana nobunzima obuvela xa usebenzisa i-website ye-scrapers. unikeza intuitive, iphuzu kwaye nqakraza ukungena acece. Nge-WebHarvy, ukukhutshwa kwedatha kwiyiphi na iwebhusayithi kuyindaba yimizuzu emibini.
Isixhobo siza kunye nevidyo kliphu ebonisa ukuba kulula kangakanani ukusetyenzwa kwaye kusetyenziswe ukufunwa kwedatha yakho. Emva kokubukela le vidiyo, uza kufunda indlela elula ngayo indawo kunye nekhonkco yokucofa. Into eyiyo ngokwenene kwesi sixhobo kukuba ayifuni naluphi na ikhowudi yokuqwalasela. Inokuqwalaselwa ukuba ichane idatha kwiyiphi na iwebhusayithi eneenkcukacha ezimbalwa ze mouse yakho. Ukukhetha idatha ukuba ichithwe, kufuneka kuphela ukukhomba imouse yakho kwizinto zeenkcukacha. Ukuyivavanya, unokwenza uvavanyo lwalo lwendlela yokuvavanya, kwaye ungabukela kwakhona ukuboniswa kwevidiyo.
Izizathu zokuba ufanele uzame iWebhuHarvy:
Ukuba yidata yolwazi oluqhelekileyo, ixabiso elincinci kunezakhiwo ezakhiweyo
Akufuneki ikhowudi yokumisela nokusetyenziswa ( 33)
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa ngisho nangomsebenzisi ongeyomsebenzi
Iza kunye nenkohlakalo yokuvota kunye nedemo yevidiyo